ဒေါင်းတမာန်: 05/17/2009 - 05/24/2009
ဗမာပြည်က ပါလို့ ပြောရမှာတောင် အတော်ကို ရှက်စရာကောင်းပါတယ်။ ရဲမြင့်အောင်ဘဲ ကြည့်ကြည့် ၊ သိန်းစိန်ဘဲ ကြည့်ကြည့် ၊ ဥာဏ်ဝင်းဘဲ ကြည့်ကြည့် အဲ ... နောက်ဆုံး သူသတ်သမား သန်းရွှေဘဲ ကြည့်ကြည့် ကမ္ဘာ့သမိုင်းရဲ့ မြှောင်းပုတ်ထဲမှာ ဇောက်ထိုးဆင်းမယ့်သူတွေ အတွဲလိုက်၊ အမေစုကို သိက္ခာချလိုက်တဲ့ရဲမြင့် အောင် ရဲ့ သေးနိမ့် ယုတ်ညံ့ တဲ့ စိတ်ထားကို အင်္ဂလိတ် စာကြောင်းလေးနှစ်ကြောင်း သုံးကြောင်းလောက်နဲ့ကိုယ့်သိက္ခာကိုယ် ပြန်ခွဲလိုက်တာတော့ သနားပါရဲ့ ။ ပြည်သားတယောက် ရှုထောင့်ကနေကြည့်ရရင်ဖြင့် အော် ငါတို့ ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့နိုင်ငံတော်က ခေါင်းဆောင်တွေကလည်း ငါသာမာန်တွေ့ နေကျ လမ်းဘေးက အရက်မူးသမားတွေလို ရင်ထဲပြောချင်တာတွေ သိက္ခာတရားမဲ့ ပြောလို့ ရပါလားလို့ ။
Posted by ဒေါင်းတမာန် at Saturday, May 23, 20090comments
Posted by ဒေါင်းတမာန် at Friday, May 22, 20090comments
Posted by ဒေါင်းတမာန် at Thursday, May 21, 20090comments
No body know Burma but every body know Aung San Suu kyi
Posted by ဒေါင်းတမာန် at Wednesday, May 20, 20090comments
CNN's Jonathan Mann talks with former President Jimmy Carter about Myanmar
Aung San Suu Kyi She is accused of breaching the terms of her house arrest.
Aung San Suu Kyi She is accused of breaching the terms of her house arrest. (Reuters: Sukree Sukplang, file photo)
* Related Story: Police testify at Suu Kyi trial
Burma's military regime will allow some reporters from foreign and local news organisations to cover the trial of opposition leader Aung San Suu Kyi, officials said.
The announcement came after the first two days of hearings at Insein Prison near Rangoon were held behind closed doors, and it is the first time the junta has allowed media into the trial ofaleading activist.
"Ten journalists will go this afternoon to get the news from the trial,"aBurma official said on the morning of the third day, without explaining the apparent change of policy.
Five will be from foreign news organisations and five from local journals and magazines, the official said, without specifying which organisations would be allowed to report on the trial.
The regime's change of heart comes amid intensifying international criticism of the charges against Ms Suu Kyi and the nature of the legal proceedings against the Nobel Peace Prize winner.
She is accused of breaching the terms of her house arrest in connection withabizarre incident earlier this month in which an American man, John Yettaw, swam to her lakeside house and stayed there for at least two nights.
The trial has so far heard from five police witnesses, with the only reports so far emerging through Ms Suu Kyi's legal team and Burma's tightly controlled state media.
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဖမ်းဆီးပြီး တရားရုံးတင်
စစ်ဆေးနေတဲ့အပေါ် ပြည်တွင်းပြည်ပက ဝေဖန်ကန့်ကွက်နေတဲ့ကြားကပဲ ဒီကနေ့
ဒုတိယနေ့အဖြစ် ကြားနာမှုတွေကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ ရန်ကုန် အင်းစိန်ထောင်တွင်း
အထူးတရားခွင်ရဲ့ ကြားနာမှုအတွင်း သက်သေခံအဖြစ် ရဲအရာရှိကြီးတဦးက ထွက်ဆို
တာတွေ လုပ်ခဲ့တယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဥပဒေအကျိုးဆောင်တွေက ပြောပါ
တယ်။ တရားခွင်အခြေအနေကို စောင့်ကြည့်နေတဲ့ ကိုအောင်လွင်ဦးက တင်ပြ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ်မှာ ကန့်သတ်တားဆီးမိန့် ထုတ်ထားတာကို ဖောက်ဖျက်
တယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်နဲ့ ရုံးတင်စစ်ဆေးမှုတွေ ဒုတိယနေ့အဖြစ် ဆက်ပြီးကြားနာတဲ့
နေရာမှာ အင်းစိန် စီအိုင်ဒီ မှုခင်းရဲတပ်ဖွဲ့က ဒုတိယရဲမှူးကြီး မောင်မောင်ခင် အပါအ၀င်
တရားလိုသက်သေ ၅ ယောက်က အမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ ထွက်ဆိုခဲ့ကြတာပါ။ ရန်ကုန်
အင်းစိန်ထောင်တွင်း အထူးတရားရုံးတခုမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ် စွဲဆိုထားတဲ့
အမှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ သူတို့ပါဝင်ပတ်သက်သမျှ အထောက်အထား သက်သေတွေနဲ့
ရုံးတော်မှာ ထွက်ဆိုခဲ့တာလို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဥပဒေအကျိုးဆောင်တွေက
ပြောပါတယ်။ ဒီအထဲက ရှေ့နေတဦးဖြစ်တဲ့ ဦးဉာဏ်ဝင်းကို တရားခွင် ဒုတိယနေ့
ကြားနာမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ မေးကြည့်ပါတယ်။
“ဒီနေ့တရားခွင်က သက်သေ ၅ ယောက်တောင်မှ စစ်ပါတယ်။ ၅ ယောက်မှာ ရဲက
၄ ယောက်၊ ရယကဥက္ကဋ္ဌ ၁ ယောက်၊ သူက မစ္စတာယက်ထောဆီက ပစ္စည်းတွေကို
ရဲက သိမ်းဆည်းတဲ့နေရာမှာ သက်သေလုပ်တယ်၊ သက်သေအဖြစ် လက်မှတ်ထိုးတယ်၊
ဒါပဲ။ ရဲ ၄ ယောက်မှာ ၂ ယောက်က မစ္စတာယက်ထောကို အင်းလျားကန်ထဲမှာ
စတွေ့ပြီး ဖမ်းဆီးတဲ့လူတွေ၊ မသင်္ကာလို့ ဖမ်းဆီးမေးမြန်းတဲ့လူတွေ။ နောက်ရဲတွေက
တော့ သူ့ကိုလွှဲယူတဲ့ဌာနက၊ သတင်းတပ်ဖွဲ့ကလူတွေပေါ့။ အားလုံး ၅ ယောက်စစ်ပါ
ကျနော်တို့ကြားတာ အင်းစိန် စီအိုင်ဒီက ရဲမှူးကြီးတယောက်လည်း ပါတယ်ဆိုတော့
သူကရော ဘယ်လိုပတ်သက်တာလဲ၊ စစ်ဆေးတဲ့အထဲမှာ။
“အင်းစိန်စီအိုင်ဒီက ရဲမှူးကြီးက ပထမ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကို သူ့ကိုလုပ်ခိုင်းတယ်။ သူ
စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု လုပ်တယ်။ သူလုပ်နေတဲ့ တန်းလန်းမှာပဲ နောက်ထပ် စုံစမ်းစစ်ဆေး
ရေးအဖွဲ့တဖွဲ့ ဖွဲ့ပြီးတော့ သူ့ကိုလွှဲခိုင်းလို့ သူ အဲဒီကိုလွှဲလိုက်တယ်။ သူလုပ်ခဲ့တဲ့၊
အန်ကယ်တို့ဘက်ကရော ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြန်လှန်မေးခွန်းထုတ်စရာတွေ ဘာတွေ
“ဟုတ်ကဲ့၊ ကျနော်တို့ အဲဒီရဲမှူးတွေကို ထုတ်ပါတယ်။ နောက် ကျန်တဲ့ဟာတော့ မေးခွန်း
သိပ်များများ မေးစရာလည်း မရှိဘူးဗျ။ ဥပမာ ပစ္စည်းသိမ်းတဲ့ရဲတို့၊ သက်သေအဖြစ်
သိမ်းတဲ့ဆီမှာ လက်မှတ်ထိုးတာတွေကတော့ ကျနော်တို့ လုံးဝ မေးခွန်းမမေးဘူး။
မေးစရာလည်း မလိုဘူးလေ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ ၃ ဦးနဲ့လည်း ဘာမှ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တရားခွင်ကိုလာတော့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေ ဘယ်လို
“ကျန်းမာရေးအခြေအနေကတော့ ကျနော်တို့အမြင်အရ ကောင်းပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ်တိုင်ကလည်း သူကျန်းမာရေးကောင်းကြောင်းကို
ပြောပါလို့ မှာပါတယ်။ သူ့မိတ်ဆွေတွေ၊ အပေါင်းအသင်းတွေကို တွေ့တဲ့အခါ
ကျန်းမာရေးကောင်းကြောင်း ပြောပါတဲ့။ ကျနော်တို့အမြင်လည်း ကောင်းတယ်လို့ပဲ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ထောင်တွင်း သူနေရတဲ့ အခြေအနေတွေရော အန်ကယ်
“တခု သူပြောပြပါတယ်။ သူ ဧည့်ရိပ်သာ အဆောက်အဦးတခုမှာ ဒေါ်ခင်ဝင်းတို့နဲ့အတူ
နေရတယ်ဆိုတာရယ် အစားအသောက် အဆင်ပြေတယ်ဆိုတာရယ်၊ ဒါတော့
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဥပဒေအကျိုးဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့ ဦးဉာဏ်ဝင်း ပြောပြ
ရုံးချိန်းကိုတော့ မနက်ဖြန် ထပ်ပြီး ချိန်းဆိုလိုက်ပြီးတော့ တရားလိုဘက်က တင်သွင်း
ဖို့ရှိတဲ့ သက်သေ ၂၂ ယောက်ထဲက ကျန်လူတွေက ဆက်ပြီး ထွက်ဆိုသွားဖို့လည်း
ရှိနေပါတယ်။ ဒီလို ထောင်တွင်းမှာ ကြားနာစစ်ဆေးမှုတွေ လုပ်နေချိန် ထောင်အနီး
အနားက လမ်းတွေကို ပိတ်ဆို့တာတွေ အပါအ၀င် လုံခြုံရေးတွေကလည်း ဆက်လက်
တင်းကျပ်ထားဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အင်းစိန်မြို့ထဲက တချို့လမ်းတွေကိုတော့
ပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်သလို အင်းစိန်မြို့မဈေးကိုလည်း ပြန်ဖွင့်ခွင့်ရခဲ့တာမို့ ဆိုင်တွေလည်း
ပြန်ဖွင့်နေပါပြီ။ ဒါပေမယ့် လုံထိန်းတွေ၊ နောက် အရပ်ဝတ် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက
တော့ အနီးကပ် စောင့်ကြည့်တာတွေ ရှိနေတုန်းပဲလို့ တရားခွင်ကို လာပြီးစနည်းနာတဲ့
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထောက်ခံသူတယောက်က ပြောပြပါတယ်။
“ကျနော်တို့ရောက်နေတဲ့နေရာက သူတို့ပိတ်ထားတဲ့ ဆေးရုံရှေ့ပေါ့၊ အဲဒီနားလေးမှာပါ။
အင်းစိန်မြို့မဈေးရဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်ပေါ့၊ ဒီဘက်ခြမ်းမှာ။ သူတို့က ဈေးအပေါ်ထပ်ကနေ
စောင့်ကြည့်ပြီးတော့ ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်၊ ဗွီဒီယိုရိုက်တယ်။ အရပ်ဝတ်တွေနဲ့ပဲ သူတို့က
တော့။ ဘာမှတော့ အနှောင့်အယှက် လာမပေးဘူး။ ရဲကားတစီးတော့ ဒီနားမှာ
Stand By ရှိနေတယ်။ ၁၂ နာရီလောက်မှာ ဈေးရှေ့က ကျနော်တို့ ဒီဘက်ခြမ်းက
ပလက်ဖောင်းပေါ်မှာ ထိုင်နေကြတဲ့လူတွေကို ရဲက လာပြီး ဖယ်ခိုင်းသွားတယ်။”
ဒီလို လုံခြုံရေးအာဏာပိုင်တွေရဲ့ စောင့်ကြည့်မှုတွေအောက်မှာပဲ ထောင်နဲ့ချီတဲ့
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (အန်န်အယ်လ်ဒီ) ပါတီဝင်တွေ
အပါအ၀င် သူ့ကိုထောက်ခံသူတွေကလည်း ထောင်အနီးအနားတ၀ိုက်မှာ ဒုတိယနေ့
အဖြစ် ရောက်ရှိ စောင့်စားနေကြတာပါ။ တကယ်တော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ကျခံနေရတာ သက်တမ်းကုန်ဆုံးကာနီးမှာ အခုလို နောက်ထပ်
ထောင်ချခံရမယ့် အခြေအနေမျိုးနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အပေါ် သူ့ကိုထောက်ခံသူတွေက
မကျေမနပ် ဖြစ်နေတာတွေလည်း ရှိနေကြတာပါ။ အထူးသဖြင့်ကတော့ တက်ကြွသူ
လူငယ်တွေကြားမှာ မခံချင်ဖြစ်တာတွေ ရှိနေတယ်ဆိုပြီး အန်န်အယ်လ်ဒီ
အတွင်းရေးမှူး ဦးဝင်းတင်က ပြောပြပါတယ်။
“ကျနော့်အတွေ့အကြုံရတော့ မနေ့က ညနေပိုင်း ၃ နာရီခွဲလောက်မှာ ကျနော်တို့
ထိုင်နေတဲ့နေရာကို လူငယ်တချို့လာတယ်၊ အန်န်အယ်လ်ဒီလား တခြားလူငယ်တွေ
လားတော့ ကျနော်မသိပါဘူး။ လူငယ် လေးငါးဆယ်ယောက်လောက်လာပြီး အဘ
ကျနော်တို့ ဒီလိုပဲ ပြန်ရတော့မှာလား၊ ဒီနေ့ ပြန်ရတော့မှာလားဆိုပြီး မေးတယ်။
သဘောကတော့ ကျုပ်တို့ ဘာမှမလုပ်ဘဲ ပြန်ရမှာလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းပေါ့ဗျာ။
ကျနော်ကလည်း ပြောရ တော်တော်ခက်တာပေါ့။ အဲဒီလိုဟာ တွေ့ခဲ့ဖူးတယ်။
ဆိုလိုတာကတော့ လူငယ်တွေကြားထဲမှာ၊ လူတွေကြားထဲမှာ ဒီ Mood ရှိနေတာ
တရားခွင် ဒုတိယနေ့ အခြေအနေတွေကို အကဲခတ်ဖို့ အင်းစိန်ထောင် အနီးအနားကို
ရောက်သွားတဲ့ အန်န်အယ်လ်ဒီပါတီ အတွင်းရေးမှူး ဦးဝင်းတင်ရဲ့ အတွေ့အကြုံပဲ
Posted by ဒေါင်းတမာန် at Monday, May 18, 20090comments
MoeMaKa DailyeNewspaper - 17th May 2009
MoeMaKa DailyeNewspaper - 17th May 2009 moemaka MoeMaKa DailyeNewspaper - 17th May 2009 - News Updates on Burma & Burmese Community
Publish at Scribd or explore others: Magazines & Newspape democracy myanmar
Ms Suu Kyi has spent much of the past two decades in prison or under house arrest.
She is being held at the notorious Insein Prison in Rangoon , where her trial is expected to be held in secret today.
Her lawyers will be present, but few people believe she will be givenafair hearing.
She has been charged with breaching the conditions of her home detention order, after an American was arrested earlier this month for spending two nights in her home.
He had swum acrossalake to her home and would not leave when asked.
Two of Ms Suu Kyi's house staff have also been charged.
Her supporters say the military junta is looking for an excuse to extend her latest home detention order.
The 63-year old Nobel Peace Laureate is 10 days away from that order expiring.
Ms Suu Kyi won elections in 1990 but was never allowed to hold office.
Over the past 20 years, she has been in detention foratotal of almost 14 years.
Ms Suu Kyi has been held in jail since last week. Last night, authorities released her personal doctor from detention after nearly two weeks.
The doctor was jailed for trying to get access to Ms Suu Kyi, who reportedly was not feeling well after the incident with the American visitor.
Posted by ဒေါင်းတမာန် at Sunday, May 17, 20090comments